1, 2. Dɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛkyerɛ nkɔmhyɛ a ɛwɔ Daniel ti 11 no ho anigye?
AHENE baanu a wɔn ani nhyia repere tumi ho denneennen. Bere a mfe twam kɔ no, obiako nya tumi, na ɛno akyi no, efi ne nsa kodi ɔfoforo no nsam. Ɛtɔ mmere bi a, ɔhene biako di tumi koraa bere a ɔfoforo no nni tumi biara, na ɛtɔ mmere bi nso a wɔnko. Nanso afei wɔsan fi ase ko mpofirim, na akodi no kɔ so. Wɔn a wɔde wɔn ho hyɛɛ saa akodi yi mu bi ne Siria Hene Seleucus I Nicator, Misraim Hene Ptolemy Lagus, Siria Hene Babea Cleopatra I a ɔbɛyɛɛ Misraim Hemmaa, Roma Ahempɔn Augustus ne Tiberio, ne Palmyra Hemmaa Zenobia. Bere a ntawntawdi no reba awiei no, Nasi Germany, Kommunist aman, Anglo-Amerika Wiase Tumi, Amanaman Apam no, ne Amanaman Nkabom no nso de wɔn ho ahyem bi. Amammui ahyehyɛde ahorow yi mu biara nnim nea asɛm no awiei bɛyɛ. Yehowa bɔfo de nkɔmhyɛ a ɛyɛ anigye yi maa odiyifo Daniel bɛyɛ mfe 2,500 a atwam ni.—Daniel, ti 11.
2 Hwɛ anigye a ɛbɛyɛ sɛ Daniel nyae bere a ɔtee sɛ ɔbɔfo no reda ahene baanu a wɔbɛba ntam akameakamedi ho nsɛm adi akyerɛ no no! Yɛn nso yɛn ani gye nea ɛbɛkɔ so no ho, efisɛ ahene baanu no apere tumi ho de abedu yɛn bere yi mu. Sɛ yehu sɛnea abakɔsɛm akyerɛ sɛ nkɔmhyɛ yi fã a edi kan no abam a, ɛbɛhyɛ yɛn gyidi ne ahotoso a yɛwɔ sɛ nkɔmhyɛ kyerɛwtohɔ no fã a etwa to no bɛbam no mu den. Tie a yebetie nkɔmhyɛ yi bɛma yɛahu bere ko a yɛwom no pefee. Ɛbɛhyɛ si a yɛasi yɛn bo sɛ yɛmfa yɛn ho nhyɛ akodi no mu bi bere a yɛde boasetɔ twɛn Onyankopɔn ma wadi aboa yɛn no mu den. (Dwom 146:3, 5) Ɛnde, ma yɛnwɛn yɛn aso yiye ntie asɛm a Yehowa bɔfo ka kyerɛ Daniel no.
WƆSƆRE TIA HELA AHEMMAN
3. Hena na ɔbɔfo no boaa no wɔ “Mediani Dario afe a edi kan mu” no?
3 Ɔbɔfo no kae sɛ: “Na me de, Mediani Dario afe a edi kan [539/538 A.Y.B.] mu no, migyinae sɛ mereso no mu na mahyɛ no den.” (Daniel 11:1) Na Dario awu, nanso ɔbɔfo no kaa n’ahenni ho asɛm sɛ bere a nkɔmhyɛsɛm no fii ase. Saa ɔhene yi na ɔhyɛe sɛ wonyi Daniel mfi gyata amoa mu no. Na Dario ahyɛ mmara nso sɛ ɛsɛ sɛ ne manfo nyinaa suro Daniel Nyankopɔn no. (Daniel 6:21-27) Nanso, ɛnyɛ Mediani Dario na ɔbɔfo no sɔre gyinae sɛ ne boafo, na mmom ɔbɔfo no yɔnko a ɔne Mikael—Daniel manfo bapɔmma no. (Fa toto Daniel 10:12-14 ho.) Onyankopɔn bɔfo de mmoa yi mae bere a Mikael ne Medo-Persia adaemone bapɔmma no dii asi no.
4, 5. Henanom ne Persia ahene baanan a wɔhyɛɛ wɔn ho nkɔm no?
4 Onyankopɔn bɔfo no toaa so sɛ: “Hwɛ, ahene baasa bɛda so asɔre wɔ Persia, na nea ɔto so anan no benya ahonyade kɛse asen wɔn nyinaa, na sɛ onya n’ahonyade no mu ahoɔden a, ɔbɛhwanyan aman nyinaa ahyɛ Hela ahemman.” (Daniel 11:2) Na henanom ne Persia ahene yi?
5 Ahene baasa a wodi kan no ne Kores Ɔkɛseɛ no, Cambyses II, ne Dario I. Esiane sɛ Bardiya (anaasɛ ebia ɔdaadaafo bi a wɔfrɛ no Gaumata) dii hene asram ason pɛ nti, nkɔmhyɛ no anka ne bere tiaa mu ahenni no ho asɛm. Wɔ 490 A.Y.B. mu no, ɔhene a ɔto so abiɛsa a ɔne Dario I bɔɔ mmɔden sɛ ɔbɛko afa Hela ne mprenu so. Nanso, Persiafo dii nkogu wɔ Marathon na woguan kɔɔ Asia Kumaa. Ɛwom sɛ Dario tɔɔ ne bo ase siesiee ne ho sɛ ɔbɛsan akotu Hela so sa de, nanso wantumi anyɛ saa ansa na ɔrewu wɔ mfe anan akyi. Ne ba Xerxes I a odii n’ade, a ɔne ɔhene “a ɔto so anan” no na na ɛsɛ sɛ ɔne wɔn kɔko. Ɔne Ɔhene Ahasweros a ɔwaree Ester no.—Ester 1:1; 2:15-17.
6, 7. (a) Ɔkwan bɛn so na ɔhene a ɔto so anan no ‘hwanyan aman nyinaa hyɛɛ Hela ahemman’? (b) Dɛn na efii tu a Xerxes tuu Hela so sa no mu bae?
6 Nokwarem no, Xerxes I ‘hwanyan biribiara hyɛɛ Hela ahemman,’ kyerɛ sɛ, Hela amansin a ɛde wɔn ho no. The Medes and Persians—Conquerors and Diplomats nhoma no ka sɛ: “Esiane sɛ abirɛmpɔn anuonyampɛfo hyɛɛ Xerxes nkuran nti, ɔfaa asase ne po so kɔtow hyɛɛ wɔn so.” Helani abakɔsɛm kyerɛwfo Herodotus a ɔtraa ase wɔ afeha a ɛto so anum A.Y.B. mu no kyerɛw sɛ “na ɔsatu biara nkyɛn eyi.” Ne kyerɛwtohɔ no ka sɛ na po so asraafo no “dodow nyinaa yɛ 517,610. Asraafo a na wɔnam fam no yɛ 1,700,000; wɔn a wɔtete apɔnkɔ so yɛ 80,000; na ɛsɛ sɛ wɔde Arabfo a wɔtete afurum so ne Libiafo a wɔde nteaseɛnam ko a misusuw sɛ wɔbɛyɛ 20,000 ka ho. Enti sɛ yɛka asase ne po so asraafo dodow no bom a, wɔn nyinaa yɛ 2,317,610.”
7 Esiane sɛ na Xerxes I pɛ sɛ odi nkonim koraa nti, ɔde n’asraafo dɔm kɛse no kɔtow hyɛɛ Hela so wɔ 480 A.Y.B. mu. Bere a Helafo no de anifere twentwɛn wɔn nan ase wɔ Thermopylae no, Persiafo no sɛee Atene pasaa. Nanso, wodii nkogu kɛse wɔ Salamis. Helafo no san dii wɔn so nkonim wɔ Plataea, wɔ 479 A.Y.B. mu. Ahene baason a wɔbɛtraa Persia Ahemman no ahengua so wɔ Xerxes akyi wɔ mfe 143 a edi hɔ no mu no biara ankɔtow anhyɛ Hela so. Nanso, afei ɔhene dɔmmarima bi sɔree wɔ Hela.
WƆKYEKYƐ AHENNI KƐSE BI MU ANAN
8. “Ɔhene dɔmmarima” bɛn na ɔsɔre gyinae, na ɔkwan bɛn so na ‘ɔde tumi kɛse dii hene’?
8 Ɔbɔfo no kae sɛ: “Ɔhene dɔmmarima bi bɛsɔre, na ɔde tumi kɛse bedi hene, na ɔbɛyɛ nea ɔpɛ.” (Daniel 11:3) Alexander a na wadi mfe aduonu no ‘sɔree’ sɛ Makedonia hene wɔ 336 A.Y.B. mu. Ɔbɛyɛɛ “ɔhene dɔmmarima”—Alexander Ɔkɛseɛ. Esiane sɛ ne papa Philip II nhyehyɛe bi kanyan no nti, ɔko faa Persia amansin a ɛwɔ Mediterranea Supɔw so no. Bere a otwaa nsubɔnten Eufrate ne Tigris no, n’asraafo 47,000 no bɔɔ Dario III asraafo 250,000 no hwetee wɔ Gaugamela. Enti, Dario guanee na wokum no ma Persia ahene abusua no baa awiei. Afei Hela bɛyɛɛ wiase tumi, na Alexander ‘de tumi kɛse dii hene na ɔyɛɛ nea ɔpɛ.’
9, 10. Ɔkwan bɛn so na nkɔmhyɛ a ɛne sɛ wɔremfa Alexander ahenni no mma n’asefo no baam?
9 Nanso na ɔhene a Alexander bedi wɔ wiase no so no renkyɛ, efisɛ Onyankopɔn bɔfo no ka kaa ho sɛ: “Na ogyina a, n’ahenni bɛbɔ, na wɔakyɛ mu akɔ ɔsoro mframa anan no mu, nanso wɔremfa mma n’asefo, na ɛrenyɛ sɛ ne tumi a ɔde dii hene no; na wobetutu n’ahenni no de ama afoforo, na ɛnyɛ eyinom.” (Daniel 11:4) Alexander anni mfe 33 anwie na ɔyare bi kum no mpofirim wɔ Babilon wɔ 323 A.Y.B. mu.
10 Wamfa Alexander ahemman kɛse no amma “n’asefo.” Ne nua Philip III Arrhidaeus anni hene mfe ason na Alexander maame Olympias ma wokum no wɔ 317 A.Y.B. mu. Alexander ba Alexander IV dii hene kosii 311 A.Y.B. na ne papa asahene no mu biako, Cassander, kum no. Alexander aguaman ba Heracles pɛe sɛ odi hene wɔ ne papa din mu nanso wokum no wɔ 309 A.Y.B. mu. Enti Alexander asefo sae, ‘ne tumi’ fii n’abusua mu.
11. Ɔkwan bɛn so na ‘wɔkyɛɛ’ Alexander ahenni ‘mu kɔɔ ɔsoro mframa anan no mu’?
11 Alexander wu akyi no, ‘wɔkyekyɛɛ n’ahenni mu kɔɔ mframa anan no mu.’ N’asahene pii twaa wɔn ho koe bere a wɔfom nsase no. Ɔsahene Antigonus I a ɔwɔ aniwa biako no bɔɔ mmɔden sɛ ɔbɛfa Alexander ahemman no nyinaa adi so. Nanso wokum no wɔ ɔko mu wɔ Ipsus wɔ Frigia. Ebeduu afe 301 A.Y.B. no, na Alexander asahene no mu baanan redi asase kɛse a wɔn sahene panyin no ko fae no so. Cassander dii Makedonia ne Hela so. Lysimachus ko faa Asia Kumaa ne Thrace. Seleucus I Nicator faa Mesopotamia ne Siria. Na Ptolemy Lagus dii Misraim ne Palestina so. Sɛnea nkɔmhyɛsɛm no kae no, wɔkyekyɛɛ Alexander ahemman kɛse no mu yɛɛ no Hela ahemman anan.
AHENE BAANU A WƆN ANI NHYIA SƆRE
12, 13. (a) Ɛyɛɛ dɛn na Hela ahenni anan no so tew bɛyɛɛ abien? (b) Ahene abusua bɛn na Seleucus hyehyɛe wɔ Siria?
12 Cassander wui bere a obedii tumi no akyi mfe kakraa bi, na Lysimachus faa Hela Ahemman no fã a ɛwɔ Europa no dii so wɔ 285 A.Y.B. mu. Wɔ 281 A.Y.B. mu no, Seleucus I Nicator kum Lysimachus wɔ ɔko mu, na ɛmaa Seleucus nyaa Asia nsase dodow no ara dii so. Antigonus II Gonatas, Alexander asahene no mu biako banana bɛtraa Makedonia ahengua no so wɔ 276 A.Y.B. mu. Bere bi akyi no, Makedonia de ne ho kɔtoo Roma so na ɛbɛyɛɛ ɔmansin a na ɛhyɛ Roma ase wɔ 146 A.Y.B. mu.
13 Afei Hela ahemman anan no mu abien pɛ na ɛkɔɔ so nyaa din—na Seleucus I Nicator di biako so na Ptolemy Lagus di nea ɛka ho no so. Seleucus na ɔhyehyɛɛ Siria Seleucus ahene abusua no. Nkurow a ɔkyekyee no bi ne Antiokia—Siria ahenkurow foforo—ne hyɛn gyinabea Seleukia. Akyiri yi Paulo kyerɛkyerɛe wɔ Antiokia, faako a wodii kan frɛɛ Yesu akyidifo sɛ Kristofo no. (Asomafo no Nnwuma 11:25, 26; 13:1-4) Wokum Seleucus wɔ 281 A.Y.B. mu, nanso n’ahene abusua no dii tumi kosii 64 A.Y.B. bere a Romafo Sahene Gnaeus Pompey de Siria hyɛɛ Romafo ase sɛ ne mansin.
14. Bere bɛn na wɔhyehyɛɛ Ptolemy ahene abusua no wɔ Misraim?
14 Hela ahemman anan no mu nea ɛkyɛ sen biara ne Ptolemy Lagus anaasɛ Ptolemy I a ɔfaa abodin ɔhene wɔ 305 A.Y.B. mu de no. Ptolemy ahene abusua a ɔhyehyɛe no dii tumi wɔ Misraim kosii sɛ Roma ko fae wɔ 30 A.Y.B. mu.
15. Ahene baanu a wɔyɛ den bɛn na wofii Hela ahemman anan no mu bae, na apereperedi bɛn na wofii ase?
15 Enti, ahene baanu a wɔyɛ den fii Hela ahemman anan no mu bae—Seleucus I Nicator dii Siria so na Ptolemy I dii Misraim so. Ahene baanu yi na wofii apereperedi a Daniel ti 11 (NW) ka sɛ ɛbɛkɔ so bere tenten wɔ “atifi fam hene” ne “anafo fam hene” no ntam ase. Yehowa bɔfo no ammɔ ahene no din, efisɛ nnipa ko a ahene baanu yi yɛ ne ɔman a wofi mu no bɛsakra wɔ mfehaha pii mu. Ɔbɔfo no kaa sodifo no ne nsɛm a ebesisi a ɛfa ntawntawdi no ho nkutoo ho asɛm na wanka ho nsɛm a enhia no.
NTAWNTAWDI NO FI ASE
16. (a) Na henanom na ahene baanu no wɔ wɔn atifi fam ne wɔn anafo fam? (b) Ahene bɛn na wodii kan bɛyɛɛ “atifi fam hene” ne “anafo fam hene”?
16 Tie! Bere a Yehowa bɔfo reka saa akodi a ɛyɛ nwonwa yi ho asɛm no, ɔka sɛ: “Na anafo fam hene no bɛyɛ den, ne [Alexander] mmapɔmma mu biako mpo; na ɔno [atifi fam hene] bedi no so na ɔde tumi kɛse a ɛsen ne tumi bedi hene.” (Daniel 11:5, NW) Edin “atifi fam hene” ne “anafo fam hene” no kyerɛ ahene a wɔwɔ Daniel nkurɔfo a na wɔanya ahofadi afi Babilon asan kɔ Yuda asase so no atifi ne anafo fam no. Na “anafo fam hene” a odi kan ne Misraim Ptolemy I. Alexander asahene no mu biako a odii Ptolemy I so na “ɔde tumi kɛse” dii hene ne Siria Hene Seleucus I Nicator. Ɔno na odii tumi sɛ “atifi fam hene.”
17. Bere a atifi fam hene ne anafo fam hene no fii ase koe no, na hena na odi Yuda asase so tumi?
17 Bere a akodi no fii ase no, na anafo fam hene no na odi Yuda asase so tumi. Efi bɛyɛ 320 A.Y.B. no, Ptolemy I maa Yudafo baa Misraim sɛ atubrafo. Yudafo kuw bi dii yiye wɔ Alexandria, faako a Ptolemy I sii nhomakorabea bi a egyee din no. Misrini Ptolemy, anafo fam hene no, ahene abusua no kɔɔ so dii Yudafo a na wɔwɔ Yuda no so kosii 198 A.Y.B. mu.
18, 19. Bere bi akyi no, ɛyɛɛ dɛn na ahene baanu a wɔn ani nhyia no yɛɛ “nhyehyɛe a ɛfata”?
18 Ɔbɔfo no hyɛɛ ahene baanu no ho nkɔm sɛ: “Na mfe bi akyi no, wɔbɛfofa wɔn ho nnamfo, na anafo fam hene no babea bɛba atifi fam hene no nkyɛn sɛnea ɛbɛyɛ na wayɛ nhyehyɛe a ɛfata. Nanso ɔbea no renkura ne basa ahoɔden no mu; na ɔbarima no ne ne basa nso rennyina; na wobeyi ɔbea no, ɔno ankasa, ne wɔn a wɔde no bae, ne nea ɔwoo no, ne nea na ɔma ɔyɛ den wɔ saa mmere no mu ama.” (Daniel 11:6, NW) Ɔkwan bɛn so na eyi baa mu?
19 Nkɔmhyɛ no anka Seleucus I Nicator ba Antiochus I a odii n’ade no ho asɛm efisɛ ɔne anafo fam hene no anko anni nkonim koraa. Mmom no Antiochus II a obedii n’ade no ne Ptolemy II a ɔyɛ Ptolemy I ba no ko kyɛe. Antiochus II bɛyɛɛ atifi fam hene na Ptolemy II bɛyɛɛ anafo fam hene. Na Antiochus II waree Laodice, na wɔwoo ɔbabarima a wɔfrɛɛ no sɛ Seleucus II, na Ptolemy II woo ɔbabea a ɔtoo ne din sɛ Berenice. Wɔ 250 A.Y.B. mu no, ahene baanu yi yɛɛ “nhyehyɛe a ɛfata.” Antiochus II gyaee ne yere Laodice aware na ɔwaree “anafo fam hene no babea” Berenice de tuaa adamfofa yi ho ka. Ɔbabarima a ɔne Berenice woo no no na ɔtraa Siria ahengua so na ɛnyɛ Laodice mma.
20. (a) Ɔkwan bɛn so na Berenice “basa” annyina? (b) Ɔkwan bɛn so na woyii Berenice, “wɔn a wɔde no bae,” ne “nea na ɔma ɔyɛ den” no mae? (d) Hena na ɔbɛyɛɛ Siria hene bere a Antiochus II hweree “ne basa” anaa tumi no?
20 Na Berenice “basa” anaa tumi a ɛboa no ne ne papa Ptolemy II. Bere a ne papa wui wɔ 246 A.Y.B. mu no, ɔne ne kunu ‘ankura ne basa ahoɔden no mu.’ Antiochus II gyaee no san kɔwaree Laodice, na ɔkae sɛ wɔn babarima nni n’ade. Sɛnea Laodice yɛɛ nhyehyɛe no, wokum Berenice ne ne babarima no. Ɛda adi sɛ wokunkum asomfo a wɔde Berenice fii Misraim kɔɔ Siria—“wɔn a wɔde no bae”—no nso. Laodice de awuduru kum Antiochus II ma enti “ne basa” anaa ne tumi nso “anyina”. Enti, Berenice papa—“nea ɔwoo no”—ne ne kunu Siriani—nea ɔma ɔyɛɛ ‘den’ bere tiaa bi no—wuwui. Eyi maa Laodice babarima Seleucus II bɛyɛɛ Siria Hene. Dɛn na ɔhene a odi hɔ a ɔbɛtraa Ptolemy ahengua so no bɛyɛ wɔ eyi nyinaa ho?
ƆHENE BI DI NE NUABEA WU HO WERE
21. (a) Na hena ne Berenice “ntini” mu “bãa bi a ɛfefɛwee” no, na ɔkwan bɛn so na ‘ɔsɔree’? (b) Ɔkwan bɛn so na Ptolemy III ‘hyɛn atifi fam hene no abankɛse mu’ na odii no so?
21 Ɔbɔfo no kae sɛ: “Na ɔbea no ntini mu bãa bi a ɛfefɛwee bi bɛsɔre asi n’ananmu, na ɔde dɔm bɛba, na wabɛhyɛn [atifi, NW] fam hene no abankɛse mu, na ɔne wɔn adi na wadi wɔn so.” (Daniel 11:7) Na Berenice awofo “bãa bi a ɛfefɛwee” anaa “ntini” yɛ ne nuabarima. Bere a ne papa wui no, ‘ɔsɔre gyinae’ sɛ anafo fam hene, Misrini Farao Ptolemy III. Osiim ntɛm ara sɛ ɔrekokum nea okum ne nuabea no. Bere a ɔkɔtoaa Siria Hene Seleucus II a Laodice ma okum Berenice ne ne babarima no, ɔtow hyɛɛ “atifi fam hene no abankɛse” no so. Ptolemy III ko faa Antiokia fã a na wabɔ ho ban denneennen no na okum Laodice. Bere a ɔfaa atifi fam hene no ahemman mu de n’ani kyerɛɛ apuei fam no, ɔsɛee Babilon na ɔtoaa so kɔɔ India.
22. Dɛn na Ptolemy III san de kɔɔ Misraim, na dɛn nti na ‘ɔtwee ne ho fii atifi fam hene no ho mfe bi’?
22 Dɛn na afei esii? Onyankopɔn bɔfo no ka kyerɛ yɛn: “Na ɔbɛfa wɔn anyame nso ne wɔn gu ahoni ne wɔn dwetɛ ne sika nnwinne fɛfɛ nnommum akɔ Misraim; na mfe bi ɔbɛtwe ne ho afi [atifi, NW] fam hene no ho.” (Daniel 11:8) Na Persia Hene Cambyses II adi Misraim so nkonim asoa Misrifo anyame, “wɔn gu ahoni,” kɔ ne man mu wɔ bɛboro mfe 200 a na atwam no mu. Bere a Ptolemy III sɛee Persia kan ahenkurow a ɛne Susan no, ogyee anyame yi fii wɔn nsam na ɔfaa wɔn ‘nnommum’ kɔɔ Misraim. Ɔfaa “dwetɛ ne nnwinne afɛfɛ” pii nso kɔe sɛ ɔko mu asade. Esiane sɛ na ɛsɛ sɛ Ptolemy III san ba ne man mu besiw atuatew bi ano nti, ‘ɔtwee ne ho fii atifi fam hene no ho,’ wanhaw no bio.
SIRIA HENE NSO TUA NO SO KA
23. Dɛn nti na atifi fam hene no ‘san kɔɔ n’asase so’ bere a ɔkɔɔ anafo fam hene no ahemman mu akyi no?
23 Atifi fam hene no yɛɛ n’ade dɛn? Wɔka kyerɛɛ Daniel sɛ: “Na ɔbɛba [anafo, NW] fam hene no ahenni mu de, nanso ɔbɛsan akɔ n’asase so.” (Daniel 11:9) Atifi fam hene—Siria Hene Seleucus II—nso kanyan ne ho. Ɔhyɛn Misraim hene a ɔwɔ anafo fam no “ahenni” anaa ahemman mu nanso odii nkogu. Seleucus II de n’asraafo nkaefo kakraa bi ‘san kɔɔ n’asase so’ koduu Siria ahenkurow Antiokia mu bɛyɛ 242 A.Y.B. mu. Bere a owui no, ne babarima Seleucus III bedii n’ade.
24. (a) Dɛn na ɛtoo Seleucus III? (b) Ɔkwan bɛn so na Siria hene Antiochus III ‘bae sɛ nsu a eyiri sram so na ɔbɛfaa’ anafo fam hene no ahemman mu?
24 Nkɔm bɛn na wɔhyɛe wɔ Siria Hene Seleucus II asefo ho? Ɔbɔfo no ka kyerɛɛ Daniel sɛ: “Na ne mma bedi ako, na wɔbɛboa dɔm akɛse asafo yuu ano, na obiako bɛba sɛ nsu a ayiri asram so, na ɔbɛsan adi ako akodu n’abankɛse ho.” (Daniel 11:10) Esiane sɛ wokum Seleucus III nti, wanni hene mfe abiɛsa. Ne nua Antiochus III dii n’ade sɛ Siria hene. Saa Seleucus II ba yi boaboaa dɔm kɛse ano sɛ ɔde kɔtow ahyɛ anafo fam hene a saa bere no na ɔne Ptolemy IV no so. Siria hene foforo a ɔwɔ atifi fam no tumi dii Misraim so nkonim na hyɛn gyinabea Seleukia, Coele-Siria mansin, nkurow Tiro ne Ptolemaïs, ne nkurow a ɛbemmɛn no san bedii ne nsam. Okunkum Ɔhene Ptolemy IV asraafo no pasaa na ɔko faa Yuda nkurow pii. Wɔ 217 A.Y.B. fefɛw bere mu no, Antiochus III fii Ptolemaïs kɔɔ atifi fam, ‘koduu n’abankɛse ho’ wɔ Siria. Nanso na nsakrae bi abɛn.
TEBEA NO SAKRA
25. Ɛhe na Ptolemy IV ne Antiochus III hyia koe, na dɛn na wɔde ‘hyɛɛ’ Misraim hene a ɔwɔ anafo no ‘nsa’?
25 Te sɛ Daniel no, yɛn ho pere yɛn sɛ yɛbɛte nea Yehowa bɔfo bɛka adi hɔ: “Na [anafo, NW] fam hene no ani bɛbere, na obefi aba ne ɔno [atifi, NW] fam hene no abɛko; na ɔde asafo yuu kɛse begyina hɔ, na wɔde asafo yuu no ahyɛ ne nsa.” (Daniel 11:11) Anafo fam hene a ɔne Ptolemy IV no de asraafo 75,000 kɔɔ atifi fam kɔko tiaa ɔtamfo no. Na Siria hene a ɔwɔ atifi fam, Antiochus III, aboaboa “asafo yuu kɛse” a wɔyɛ 68,000 ano sɛ ɔde bɛko atia no. Nanso wɔde “asafo” no ‘hyɛɛ’ anafo fam hene no “nsa” wɔ ɔko a esii wɔ mpoano kurow Raphia a na ɛbɛn Misraim hye so no mu.
26. (a) “Asafo” bɛn na anafo fam hene no soaa wɔn kɔe wɔ Raphia ko mu, na nsɛm bɛn na ɛwɔ apam a wɔyɛe wɔ hɔ no mu? (b) Ɔkwan bɛn so na Ptolemy IV ‘amfa ne gyinabea a ɛkorɔn no anni dwuma’? (d) Hena na ɔbɛyɛɛ anafo fam hene a odi hɔ?
26 Nkɔmhyɛ no toa so sɛ: “Na ɔbɛsoa dɔm no akɔ. Na ne koma bɛma ne ho so, na ɔbɛka ɔpedudu agu fam; nanso ɔremfa ne gyinabea a ɛkorɔn no nni dwuma.” (Daniel 11:12, NW) Ptolemy IV a ɔne anafo fam hene no ‘soaa’ Siria asraafo a wɔnam fam 10,000 ne wɔn a wɔtete apɔnkɔ so 300 kɔɔ owu mu, na ɔfaa 4,000 nnommum. Afei ahene no yɛɛ apam a ɛmaa Antiochus III kɔɔ so dii Siria hyɛn gyinabea Seleukia so nanso Foinike ne Coele-Siria fii ne nsa. Nkonimdi yi nti, Misraim hene a ɔwɔ anafo fam no ‘maa ne ho so’ tiaa Yehowa titiriw. Ptolemy IV kɔɔ so dii Yuda so. Nanso, wamfa ‘ne gyinabea a ɛkorɔn’ no antoa nkonim a odii wɔ Siria hene a ɔwɔ atifi fam so no so. Mmom no, Ptolemy IV dii ahohwisɛm na ne babarima Ptolemy V a na wadi mfe anum no bɛyɛɛ anafo fam hene a odi hɔ mfe bi ansa na Antiochus III rewu.
ƆKOFO NO SAN BA
27. Ɔkwan bɛn so na atifi fam hene no san bae ‘wɔ mmere no awiei’ sɛ obegye nsase afi Misraim?
27 Esiane Antiochus III mmarimasɛm nyinaa nti, wɔfrɛɛ no Antiochus Ɔkɛseɛ. Ɔbɔfo no kaa ne ho asɛm sɛ: “Na atifi fam hene no bɛsan aba abɛboaboa dɔm a ɛsen kan de no ano; na mmere no awiei, mfe bi akyi no, ɔbɛba, ɔde asraafo dɔm kɛse ne nneɛma pii na ɛbɛyɛ saa.” (Daniel 11:13, NW) Na “mmere” yi yɛ bere a Misrifo no dii Siriafo no so nkonim wɔ Raphia no akyi mfe 16 anaa nea ɛboro saa. Bere a aberantewa Ptolemy V bɛyɛɛ anafo fam hene no, Antiochus III de “dɔm a ɛsen kan de no” kɔe sɛ ɔrekogye ne nsase a Misraim hene a ɔwɔ anafo fam gye fii ne nsam no. Enti, ɔne Philip V, Makedonia Hene kɔyɛɛ biako.
28. Ɔhaw ahorow bɛn na anafo fam hene aberantewa no hyiae?
28 Na anafo fam hene no hyia ɔhaw ahorow nso wɔ n’ahemman mu. Ɔbɔfo no kae sɛ: “Na mmere no mu no, nnipa pii bɛsɔre atia [anafo, NW] fam hene no.” (Daniel 11:14a) Ɛbaa saa sɛ nnipa pii ‘sɔre tiaa anafo fam hene no.’ Wɔ Antiochus III ne n’adamfo Makedoniani no asraafo dɔm a na anafo fam hene aberantewa no reko atia wɔn akyi no, na ohyia ɔhaw ahorow wɔ ne kurom wɔ Misraim. Esiane sɛ ne hwɛfo Agathocles a odii hene wɔ ne din mu no yɛɛ ahantan wɔ Misrifo no so nti, nnipa pii tew atua. Ɔbɔfo no ka kaa ho sɛ: “Na wo man mu adwowtwafo mma no bɛma wɔn ho so sɛ wɔrebɔ mmɔden ama anisoadehu bi aba mu; na wɔbɛhwehwe ase.” (Daniel 11:14b, NW) Daniel manfo mu binom mpo bɛyɛɛ “adwowtwafo mma,” anaa ɔman anidanfo. Nanso “anisoadehu” biara a saa Yudafo mmarima no nyae sɛ wɔbɛma Amanaman mufo agyae wɔn so di no amma mu, na wobedi nkogu anaa “wɔbɛhwehwe ase.”
29, 30. (a) Ɔkwan bɛn so na “anafo fam dɔm” dii nkogu wɔ ntua a efi atifi fam no mu? (b) Ɛyɛɛ dɛn na atifi fam hene no ‘begyinaa asase fɛfɛ no so’?
29 Yehowa bɔfo no san hyɛɛ nkɔm sɛ: “Na [atifi, NW] fam hene no bɛba, na wabɛhɔre pempe, na wafa kurow bi a ɛyɛ den: na [anafo, NW] fam dɔm no rentumi nnyina, na ne nsraafo a wɔapaw wɔn mpo rennya ahoɔden nnyina. Na nea ɔba no so no bɛyɛ sɛnea ɔpɛ, na obi nni hɔ a obegyina n’anim; na obegyina asase fɛfɛ no so, na ɔde ne nsa asɛe no.”—Daniel 11:15, 16.
30 Asraafo dɔm a wɔhyɛ Ptolemy V ase, anaasɛ “anafo fam dɔm” no bedi nkogu bere a atifi famfo tow hyɛ wɔn so no. Wɔ Paneas (Kaesarea Filipi) no, Antiochus III maa Misrifo Sahene Scopas ne n’asraafo 10,000, anaa “nsraafo a wɔapaw wɔn” guan kɔ Sidon, “kurow bi a ɛyɛ den” no mu. Ɛhɔ na Antiochus III ‘hɔree pempe’ ko faa saa Foinike hyɛn gyinabea no wɔ 198 A.Y.B. mu. Ɔyɛɛ “sɛnea ɔpɛ,” efisɛ Misraim hene a ɔwɔ anafo fam dɔm no antumi annyina n’anim. Afei Antiochus III kɔtow hyɛɛ Yerusalem, “asase fɛfɛ” no ahenkorow a ɛne Yuda so. Wɔ 198 A.Y.B. mu no, Siria hene a ɔwɔ atifi fam no gyee Yerusalem ne Yuda fii Misraim hene a ɔwɔ anafo no nsam dii so. Na Antiochus III no, atifi fam hene no fii ase ‘begyinaa asase fɛfɛ no so.’ Na ‘ɔsɛe wɔ ne nsam’ ma Yudafo ne Misrifo a na wɔsɔre tia no no. Ɛnde atifi fam hene yi betumi ayɛ nea ɔpɛ akodu bere bɛn?
ROMA SIW ƆKOFO NO KWAN
31, 32. Dɛn nti na atifi fam hene no ne anafo fam hene no yɛɛ asomdwoe “apam”?
31 Yehowa bɔfo de mmuae yi ma yɛn: “Na ɔno [atifi fam hene no] de besi n’anim sɛ ɔde n’ahemman nyinaa mu ahoɔden bɛba, na ɔne no abɛyɛ apam a ɛfata; na ɔbɛyɛ ade wɔ ɔkwan a etu mpɔn so. Na wɔbɛma no kwan ma wasɛe mmea mu ɔbabea. Na ɔrennyina, na ɔrenkɔ so nyɛ ne de.”—Daniel 11:17, NW.
32 Antiochus III, atifi fam hene no ‘de sii n’anim’ sɛ “ɔde n’ahemman nyinaa mu ahoɔden” bedi Misraim so. Nanso ɔne Ptolemy V, anafo fam hene, no kɔyɛɛ asomdwoe “apam.” Na nneɛma a Roma gye fii Antiochus III hɔ no ama wasakra ne nhyehyɛe. Bere a Ptolemy V ne Makedonia hene Philip V yɛɛ biako sɛ wɔbɛko atia Misraim hene aberantewa no agye ne nsase afi ne nsam no, n’ahwɛfo kɔhwehwɛɛ ahobammɔ fii Roma. Roma huu hokwan a ɛde bɛtrɛw ne nkɛntɛnso mu nti, ɛdaa ne tumi adi.
33. (a) Nhyehyɛe bɛn na na ɛwɔ asomdwoe apam a Antiochus III ne Ptolemy V yɛe no mu? (b) Atirimpɔw bɛn nti na wɔmaa Cleopatra I ne Ptolemy V waree, na dɛn nti na nhyehyɛe no anyɛ yiye?
33 Esiane sɛ Roma hyɛɛ Antiochus III nti, ɔne anafo fam hene no yɛɛ asomdwoe ho nhyehyɛe. Sɛ anka Antiochus III de nsase a wako afa bɛsan ama ne wuranom sɛnea Roma hyɛe no, nhyehyɛe kɛkɛ na ɔyɛe sɛ ɔde bɛma denam ne babea Cleopatra I—“mmea mu ɔbabea”—a ɔbɛma waware Ptolemy V no so. Na ɔde amansin a Yuda, “asase fɛfɛ” no, ka ho bɛma sɛ ne babea no tiade. Nanso, bere a wɔwaree wɔ 193 A.Y.B. mu no, Siria hene amfa amansin yi amma Ptolemy V. Na eyi yɛ amammui kwan so aware a wɔhyehyɛe na ama Siria adi Misraim so. Nanso, nhyehyɛe no anyɛ yiye efisɛ Cleopatra I ‘ankɔ so anyɛ ne de,’ efisɛ akyiri yi okogyinaa ne kunu akyi. Bere a ɔko sii Antiochus III ne Romafo no ntam no, Misraim kɔɔ Roma afã.
34, 35. (a) Aman bɛn “nsuano” na atifi fam hene no de n’ani kyerɛe? (b) Ɔkwan bɛn so na Roma maa “ahohora” a efi atifi fam hene no hɔ baa awiei? (d) Ɔkwan bɛn so na Antiochus III wui, na hena na ɔbɛyɛɛ atifi fam hene a odi hɔ?
34 Bere a na ɔbɔfo no reka atifi fam hene no nkogudi ahorow yi ho asɛm no, ɔde kaa ho sɛ: “Na [Antiochus III] bɛdan n’ani akyerɛ nsuano aman, na ɔbɛfa bebree; na ɔsafohene bi [Roma] bɛma wagyae [Roma] ahohora no bɔ, na mpo wadan ahohora [a Antiochus III bɔ no] no agu ɔno ankasa so. Na [Antiochus III bɛdan] n’ani akyerɛ n’ankasa asase so abankɛse, nanso obehintiw ahwe ase, na wɔrenhu no.”—Daniel 11:18, 19.
35 Na “nsuano” no yɛ Makedonia, Hela, ne Asia Kumaa de. Ɔko baa Hela wɔ 192 A.Y.B. mu, na ɛmaa Antiochus III kɔɔ Hela. Esiane sɛ Roma ani annye mmɔden a Siria hene bɔe sɛ ɔbɛko afa nsase afoforo no ho nti, otuu no so sa. Romafo dii no so wɔ Thermopylae. Bɛyɛ afe wɔ bere a Siria dii nkogu wɔ Magnesia ko no mu wɔ 190 A.Y.B. akyi no, ɛde biribiara a na ɛwɔ wɔ Hela, Asia Kumaa, ne Taurus Mmepɔw atɔe fam nsase no mae. Roma maa Siria hene a ɔwɔ atifi fam no tuaa tow kɛse, na odii no so. Esiane sɛ wɔpam Antiochus III fii Hela ne Asia Kumaa na wɔsɛee ne po so akohyɛn dodow no ara nti, ‘ɔdan n’ani kyerɛɛ abankɛse a ɛwɔ n’ankasa asase’ a ɛne Siria so no. Na Romafo no ‘adan ahohora a na ɔbɔ wɔn no agu n’ankasa so.’ Antiochus III wui bere a na ɔrebɔ mmɔden sɛ obewia asɔredan bi mu nneɛma wɔ Elymaïs, Persia, wɔ 187 A.Y.B. mu. Enti, ‘ɔhwee ase’ wɔ owu mu na ne ba Seleucus IV bedii n’ade sɛ atifi fam hene a odi hɔ.
NTAWNTAWDI NO KƆ SO
36. (a) Ɔkwan bɛn so na anafo fam hene no bɔɔ mmɔden sɛ ɔbɛtoa apereperedi no so, na dɛn na ɛtoo no? (b) Ɔkwan bɛn so na Seleucus IV wui, na hena na odii n’ade?
36 Sɛ anafo fam hene no, Ptolemy V bɔɔ mmɔden sɛ ne nsa bɛka amansin a ɛsɛ sɛ anka wɔde ma no sɛ Cleopatra tiade no, nanso wɔde awuduru kum no. Ptolemy VI bedii n’ade. Na Seleucus IV nso ɛ? Esiane sɛ na ohia sika de atua ɛka kɛse a Roma bɔɔ wɔn no nti, ɔsomaa ne sika sohwɛfo Heliodorus sɛ onkogye ahode a wose wɔde asie Yerusalem asɔrefie hɔ mmra. Esiane sɛ Heliodorus pɛe sɛ ɔtra ahengua no so nti, okum Seleucus IV. Nanso, Pergamum Hene Eumenes ne ne nua Attalus de ɔhene a wokum no no nua Antiochus IV sii ahengua no so.
37. (a) Ɔkwan bɛn so na Antiochus IV bɔɔ mmɔden daa ne ho adi sɛ ɔkorɔn sen Yehowa Nyankopɔn? (b) Dɛn na efii Yerusalem asɔrefie no ho fĩ a Antiochus IV gui no mu bae?
37 Antiochus IV, atifi fam hene foforo no bɔɔ mmɔden sɛ obegu Yehowa som ho nhyehyɛe na ɔde akyerɛ sɛ ɔkorɔn sen Onyankopɔn. Ohyiraa Yerusalem asɔrefie no so maa Seus anaa Jupiter, de buu Yehowa animtiaa. Wɔ December 167 A.Y.B. mu no, ɔde abosonsomfo afɔremuka sii asɔrefie hɔ adiwo hɔ afɔremuka kɛse a wɔbɔ ɔhyew afɔre wɔ so da biara ma Yehowa no so. Dadu akyi no, wɔbɔɔ afɔre maa Seus wɔ abosonsomfo afɔremuka no so. Asɔrefie no ho fĩ a woguu yi maa Makabiifo no dii Yudafo anim tew atua. Antiochus IV ne wɔn koe mfe abiɛsa. Wɔ 164 A.Y.B. mu, bere a wɔrekae asɔrefie no ho fĩ a wogui no, Judas Maccabaeus san hyiraa asɔrefie no so maa Yehowa na wɔde ahosohyira afahyɛ—Hanukkah sii hɔ.—Yohane 10:22.
38. Ɔkwan bɛn so na Makabiifo ahenni baa awiei?
38 Ɛbɛyɛ sɛ Makabiifo no ne Roma yɛɛ apam wɔ 161 A.Y.B. mu, na wɔhyehyɛɛ ahemman wɔ 104 A.Y.B. mu. Nanso wɔne Siria hene a na ɔwɔ atifi fam no ntam ntawntawdi no annyae. Awiei koraa no, wɔtoo nsa frɛɛ Roma sɛ ɛmfa ne ho mmegye asɛm no mu. Wɔ asram abiɛsa ntua akyi no, Romafo Sahene Gnaeus Pompey ko faa Yerusalem wɔ 63 A.Y.B. mu. Wɔ 39 A.Y.B. mu no, Roma Mmarahyɛ Bagua no paw Herode—Edomni bi—sɛ ɔnyɛ Yuda hene. Bere a oguu Makabiifo ahenni no, ɔko faa Yerusalem wɔ 37 A.Y.B. mu.
39. Ɔkwan bɛn so na woanya Daniel 11:1-19 a yɛasusuw ho no so mfaso?
39 Hwɛ sɛnea ɛyɛ anigye sɛ yebehu sɛ ahene baanu a wɔredi ako no ho nkɔmhyɛ fã a edi kan anya mmamu pɛpɛɛpɛ! Nokwarem no, hwɛ anigye a ɛyɛ sɛ yɛahwehwɛ bere a wɔde nkɔmhyɛsɛm no maa Daniel no akyi mfe bɛyɛ 500 abakɔsɛm mu na yɛahu wɔn a wobegyinaa hɔ sɛ atifi fam hene ne anafo fam hene no! Nanso ahene baanu yi amammui sakra bere a wɔakɔ so ako fi bere a Yesu Kristo wɔ asase so de besi yɛn bere yi so. Sɛ yɛde nsɛm a esisii wɔ abakɔsɛm mu toto anwonwasɛm a ɛda adi wɔ nkɔmhyɛ yi mu ho no a, yebetumi ahu ahene baanu a wɔredi ako yi.
• Ahene baanu a wɔyɛ den bɛn na wofii Hela ahemman no mu bae, na apereperedi bɛn na ahene no fii ase?
• Sɛnea wɔka siei wɔ Daniel 11:6 no, ɛyɛɛ dɛn na ahene baanu no yɛɛ “nhyehyɛe a ɛfata”?
• Ɔkwan bɛn so na akodi no kɔɔ so wɔ
Seleucus II ne Ptolemy III ntam (Daniel 11:7-9)?
Antiochus III ne Ptolemy IV ntam (Daniel 11:10-12)?
Antiochus III ne Ptolemy V ntam (Daniel 11:13-16)?
• Atirimpɔw bɛn nti na wɔmaa Cleopatra I ne Ptolemy V waree, na dɛn nti na nhyehyɛe no anyɛ yiye (Daniel 11:17-19)?
• Ɔkwan bɛn so na woanya Daniel 11:1-19 mu nsɛm a woatie no so mfaso?
[Nsɛm a wɔahyehyɛ/Mfonini wɔ kratafa 228]
AHENE A WƆN HO ASƐM WƆ DANIEL 11:5-19
(ne babea Cleopatra I) Nea odii n’ade:
Adedifo: Ptolemy VI
Sika a Ptolemy II ne ne yere mfonini wɔ so
Ptolemy III ne n’adedifo sii asɔredan yi wɔ Horus wɔ Idfu, Misraim Atifi fam
[Asase Mfonini/Mfonini ahorow wɔ kratafa 216, 217]
Edin “[atifi, “NW”] fam hene” ne “[anafo, “NW”] fam hene” no kyerɛ ahene a na wɔwɔ Daniel nkurɔfo asase no atifi fam ne anafo fam
Antiochus I ɔboda wɔ Commagene, Turkey
Sika a Ptolemy V mfonini wɔ so
Ptolemy III Pon wɔ Karnak, Misraim
[Mfonini nkutoo na ɛwɔ kratafa 210]
[Kratafa 215 mfonini]
[Kratafa 218 mfonini]
Share Share Ahene Baanu a Wɔredi Ako
dp ti 13 kr. 210-229